Michael Reynolds Maqaallo ku saabsan Martech Zone |
Maqaallada by Michael Reynolds
Maxay Websaydhka RFPs u shaqeyn la’yihiin
Anaga oo ah wakaalad dijitaal ah xagga ganacsiga ilaa 1996, waxaan fursad u helnay inaan abuurno boqolaal boggag shirkado iyo kuwa aan macaash doon ahayn ah. Wax badan ayaan ka baranay jidka waxaanna howsheena u gaarsiinnay mashiin si fiican loo saliiday. Nidaamkeennu wuxuu ka bilaabmaa naqshadeynta websaydhka, taas oo noo oggolaanaysa inaan qabanno xoogaa shaqo bilow ah oo aan faahfaahinno macmiilka ka hor intaanan aad uga fogaan wadada xigashada iyo naqshadeynta. In kasta oo ay taasi jirto
Waan qirayaa… ogeysiiskii dhowaa ee burburka u dhexeeya Twitter iyo LinkedIn ayaa qalbigeyga diiriyay. Mar dambe dadku awood uma yeelan doonaan inay si maskax la'aan ah u qarxiyaan cusbooneysiintooda Twitter-ka ee LinkedIn iyadoon loo baahnayn inay si dhab ah u galaan oo ay galaan. In kasta oo aan ogahay in kuwa kale ay wadaagaan farxadayda, maxay yihiin faa'iidooyinka iyo khasaaraha ka soo gaara isku-xidhka koontadaada Twitter-ka ee shabakadaha kale? Maadaama Facebook wali ogol yahay dhaqankan, wali way dhacaysaa. In kasta oo ay ii wado nuts, waan qirayaa
Isniin, February 21, 2011 Sabtida, Oktoobar 29, 2011 Michael Reynolds
Ku shaqeynta meherad yar waa dhib iyo walbahaar. Waxaad si joogto ah u xiran tahay koofiyado badan, oo aad damineysaa dabka, waxaadna isku dayeysaa inaad sameysid dollar kasta sida ugu macquulsan. Waxaad diiradda saareysaa boggaaga, dhaqaalahaaga, shaqaalahaaga, macaamiishaada, iyo astaantaada waxaadna rajeyneysaa inaad sameyn karto go'aanno wanaagsan markasta. Nasiib darrose, dhammaan tilmaamaha milkiilayaasha meheradaha yaryar la jiido, way adkaan kartaa in waqti iyo fiiro ku filan la geliyo sumadeynta. Si kastaba ha noqotee,
Sidaad ogtahay, baloog garaynta ayaa ah waxqabad suuqgeyn weyn waxayna u horseedi kartaa hagaajinta qiimeynta mashiinka raadinta, kalsoonida xoogan, iyo joogitaanka wanaagsan ee warbaahinta bulshada. Si kastaba ha noqotee, mid ka mid ah dhinacyada ugu adag ee baloog garaynta ayaa noqon kara fikradaha. Fikradaha Blog waxay ka imaan karaan ilo badan, oo ay ku jiraan isdhexgalka macaamiisha, dhacdooyinka hadda jira, iyo wararka warshadaha. Si kastaba ha noqotee, hab kale oo weyn oo lagu helo fikradaha baloogyada ayaa ah in si fudud loo isticmaalo muuqaalka natiijooyinka degdegga ah ee cusub ee Google. Wadada loo maro
Inta badan dadka i garanaya ayaa ka warqaba jacaylka aan u qabo Inbox Zero. Markii ugu horreysay ee caan ka dhigay Merlin Mann, Inbox Zero waa hab lagu maareeyo emaylkaaga oo sanduuqaaga madhan looga dhigo. Waa nidaam wax soo saar e-mayl oo weyn. Waan qaatay fikradaha, xoogaa waan ka sii dardaarmay, oo waxaan ku daray xoogaa maroojin cusub. Waxaan sidoo kale si joogto ah u bartaa kalfadhiyo waxbarasho oo ku saabsan wax soo saarka emaylka. In kastoo aan ahay taageere weyn, maahan qof walba